Fanorenana sy vaovao Toby, fampitam-baovao 15/02/2020 Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Pouru Saint-Remy, faha 15 febroary 2020
Fifaliana ho anay ny manome ny vaovao mikasika ny fanorenana ny trano ho Toby. Dingana lehibe izany fanorenana izany hirosoana amin’ny fikasàn’ny Tompo mahakasika ny Toby eto Pouru Saint Rémy.
1. Fitohizan’ny asa:
Vita soa aman-tsara ny fanomanana ny “appel d’offre” hisafidianantsika ny “maître d’oeuvre”. Tonga àry ny fotoana hitadiavana sy hisafidianana ny mpanao mari-trano (“architecte”) iarahantsika miasa mandritra ny asa fanorenana ho avy. Ampiasaina ny “plateformes internet” izay fampiasan’ny mpanao appels d’offre ary apetraka amin’ny tranokalan’ny Toby koa ny mombamomba izany: https://spflme-tobypouru.org/la-construction-avance/
Miangavy antsika izay mahafantatra mpanao mari-trano mba hampiseho azy io rohin’ny Fanorenana, voalaza teo aloha io. Manana hatramin’ny 30 aprily 2020 izy hanolotra ny dossier-ny amin’izany.
Mahatratra 222 000€ izao ny vola an-tànana, ao amin’ny kaontin’ny Toby.
Araka ny efa voalaza teo aloha dia ampy hanombohana ny asa io vola io, raha toa ka mitohy tsy miato ny fanomezana. Toy izao ny antsipiriany:
316 800€ ny vola voaangona hatramin’ny fanombohana ny asa
83 000€ nividianana ny tany hanorenana ny trano ho Toby
9 000€ + 7 000€ nomena ho karaman’ny mpiara-miasa « Maître d’oeuvre » (Entreprise Procimmo) mivantana, nanaovana ny « Pré-étude » sy « plan », « estimation » voalohany ary fanomanana ny « dossier permis de construire »
2 800€ nanamboarana ny site web, niarahana tamin’ny orinasa Entry
3. Mikasika ny rosia: Tokony ho efa naharay rosia na « confirmation » ny vola nalefany ny tsirairay izay mandefa vola ao amin’ny kaontin’ny Toby. Raha tsy mbola naharay rosia ianao ka te hahazo izany dia azo omenao ny mpitam-bolan’ny Toby ny adiresy “mail”.
4. Mikasika ny « électricité »: Mitohy ny antso ho an’izay rehetra manan-talenta hikarakara ny « plans électriques courant fort sy courant faible ». Aza misalasala miantso ny tompon’andraikitra ao an-toerana:
RANDRIAMBOLOLONA Jean 06 11 39 60 73
5. Mikasika ny lakozia: Mitohy ihany koa ny antso amin’ny fanangonana fanaka an-dakozia « professionnel » toy ny réfrigérateur, four à étage, marmite chauffante 80L…
Aza misalasala ihany koa miantso ny tompon’andraikitra raha te hanao fanomezana ianao na mahita fanaka an-dakozia « professionnel » hovidian’ny Toby.
Eto am-pamaranana, Andriamanitra irery ihany no manana ny fahefana feno hanoro antsika mpanao mari-trano matotra sy mahay ary mahatoky. Koa mangataka vavaka amintsika, isan’andro mba ho tanteraka araka ny sitrapon’Andriamanitra ity « appel d’offre » ity. Etsy an-daniny dia mitohy koa ny famoriam-bolantsika ho an’ny asa fanorenana, isam-batan’olona, isan-tokantrano, isam-piangonana, fitandremana… Manolotra fisaorana feno ho an’izay efa nandray anjara sy mboia mazoto hanohy izany. Mikasa izahay ny hizara ny vaovao amintsika indray amin’ny volana Mey, raha vao tapitra ny fe-potoana fandraisana ny « dossiers » mpanao mari-trano.
Manao veloma finaritra anareo arnin`ny anaran’ny Jesosy Kristy Tompo.